महिलाले खेत जोतिरहेको देखेपछि अभिनेता सोनु सुदले दिए ट्र्याक्टर उपहार ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
महिलाले खेत जोतिरहेको देखेपछि अभिनेता सोनु सुदले दिए ट्र्याक्टर उपहार !
Published : 28 July, 2020 2:04 pm
भारतीय अभिनेता सोनु सूदले कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा कठिन अवस्थामा रहेका धेरै मानिसलाई सहयोग गरेर मन जितिरहेका छन्। सोनुले यो अवधिमा बाटाेमा अलपत्र परेका कयाैं मजदुरहरुलाई घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएका छन् भने कयौंलाई खाना र राहत वितरण गरेका छन्। हालै मात्र उनले आन्ध्र प्रदेशको एक किसान परिवारलाई खेत जोत्ने ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएका छन्। एक महिलाले आफ्नी दुई छोरीहरुलाई जुवामा नारेर हलोले खेत जोतिरहेका थिए। सोनुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त परिवारका बारेमा जानकारी पाए लगत्तै सहयोग गरेका हुन्।
उनले ट्विटरमा किसनका छाेरीहरुले पढाइमा ध्यान दिनु पर्ने र किसानलाई जाेत्न गाेरुकाे व्यवस्था गर्नु पर्ने लखेका थिए। केही समयपछि उनले उक्त किसान परिवारकाे गाेरु नभई ट्र्याक्टरको अधिकार भएको लेखे। उनले साँझसम्म ट्र्याक्टर किसानको आँगनमा पुग्ने पनि बताए। सोनुको उक्त बाचा साँझ नपर्दै पुरा भयो। उनले किसानको घरमा पाँच घन्टामै ट्र्याक्टर पुर्‍याएदिए।
आन्ध्र प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुले ट्र्याक्टरका साथ रहेको उक्त परिवारको भिडियो शेयर गरेका छन्। चित्तुर जिल्लाका नागेश्वर राव परिवारलाई सहयोग गरेकोमा उनले अभिनेता सुदको प्रशंसा गरे। उनले दुवै युवतीको पढाइ खर्च व्यहाेर्ने बताएका छन्। आन्ध्र प्रदेशको चित्तुर जिल्लामा बस्ने यो परिवारको आर्थिक अवस्था लकडाउनपछि प्रभावित भएको थियो।